Sidee ku ogaan kartaa qofka ku jecel. Sidee Ku Ogaan Kartaa Ninka Ku Jecel
Category: Sidee ku ogaan kartaa qofka ku jecel
By Nikom 27.02.2021 Comments on Sidee ku ogaan kartaa qofka ku jecel
Hadii aad tahay gabadh ama wiil ku dadaal sidii aad u ogaan laheyd qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo ama balwadiisu tahay adigoo aan weydiin qofka aad jeceshahay, Balse raadi wada kale oo aad ku ogaan karto sida adigoo ka wareysanaya saaxiibkii ama saaxibadeed adigoo aan lagaa dareemin u jeedkaadu waxa uu yahay. Sidaad ku ogaan kartaa inaad adiga iyo ilmahaaguba aad cafimaad qabtaan intaad uurka leedahay? Waxaad ku ogaan kartaa inaad tahay hooyo cafimaad leh oo uurkeeduna yahay mid cafimaad qaba sidan.
Dadka wax garadka ah mar kaste waxay ku dadaalaan fursad ay ku hanan karaan jaceylka dadka kale iyo wanaagooda taana waa sababta u fududeysa guusha Qofkan la jecel yahay waxa uu u yahay cadow qofka jecel waxana u yahay adoon dulaysan, waxa ka mid ah dhibaatooyinka caashaqa dulmiga marka mawduucan laga hadalyo mararka qaarkood waxa dhaca dulmi weyn oo ku dhaca qofka wax jecel ehelkiisa iyo meelkiisa isagoo isku dayaya si uu u soo bandhigo u jeedadiisa una qaybiyo maalkiisa cid rumaysata iyo.
Maxaad reerka ku soo darsaneysaa adigu maal, maskax iyo muruq? Watch Queue Queue. Kareemada ayaa u dhaqma sida rinjiga guryaha iyo alaabaha la mariyo, waxaana ay sarre u qaadaan halista […].
Waa maxay jaceyl daacad ah? Sidee ku ogaan kartaa jaceyl daacad ah? Waa maxay farqiga u dhexeeyo jaceyl daacad ah iyo midka dhalanteedka ah? Hadaba baro jaceyl daacad ah ama qof ku jecel sida aaad ku ogaan karto. Sidee lagu ogaan karaa Hibada?
Hibadu way qarsoontahay waxaana fiican in la soo shaac-saaro. Dumarka qaar ayaa aad uga werwera badbaadada qofka ay jecel yihiin, sidaa daraadeed haddii gabadhu ay aad xil isaga saarto in ay ogaato halka aad joogto iyo waxa aad ku sugan tahay iyada oo ku waydiinaysa dad xog ogaal kuu ah, gabadhaasi way ku jeceshahay.
Run ahaantii jacaylku waa tartan qarsoon oo ogaanshihiisu ay wakhti qaadato, mana fududa marka u horaysa in la dareemo gabadh ku jecel sida ay u fududahay in aad dareento waxyaabaha kale, Had iyo jeer dadka uu jacaylku la soo darso rag iyo dumar kuu doono ha ahaadee si daacad ah ugama run sheegaan, ku dhiirashada inay si badheedh leh ugu soo bandhigaan jacaylka ay u hayaan qofka sida dhabta ah.
Haddii aad Boogaadin habka kharash ah oo wax ku ool u ah safarka soo socda tareenka, safarka on tareenka badbaadin kartaa lacagtaada si fudud.
Naagaha dabada - dl. Naagaha foorarka lagu waso. Badanaaba ragga S0omaalidu waxay ku caan yihiin guurka badan ee la guursado hal mar wax ka badan. Diinteena islaamku wax walbooy inaga reebto waxaa ku jira maslaxadeena aduun iyo aakhiro aynu ogaano ama yaynaan ogaan maslaxdaa. Dabada wasmada - br. Intaas marka aad nadiif ka noqoto allena aad ku xirnaato adiga wax ku dhibo ma arkaysid wax kasto ood alle weydiisatana waxaa ku heleysaa si sahlan waxaadna noqoneysa mid gabar fiican hela, bulshada dhamina hadalkiisa ay u riyaaqan xikmadiisa laga helo lana weeneyo, sharaftaasna waxaa ku gaari kartaa adoo alle ku xirnaada si dhaba danbi dhaaf.
Walli waxaan ahay mid siddii kuu jecel!. Qaadka, sigarka iyo warshadaha sharaabka iyo macmaanka ah ganacsiyada faraha baas ku haya caafimaadka dadwaynaha. Waqtigiisa kuma xad gudubtaan waqti kalena iskama lumisaan. Ninka ama gabadha sheeganeyso in ay ku jeceshahay oo leh toban ama shan ka mid ah xataa calaamadaha aan kor ku soo xusay ka bixi noloshaada, hadii aad badbaado rabtid.
Raaxada galmada video. Naagta aan la wasin Naagta aan la wasin. Sidee ku ogaan Qofka Dhab kuu jecel ee kaa Helay asagoon kuu sheegin isha ka Fiiri. Waxaa laga yaabaa in aad marar badan maqashay jaceyl daacad ah ayaan kuu hayaa balse mudo kadib xiriirkiini. Dad qaar waxay rabaan jaceyl, qaarna waxay rabaan lacag iyo caannimo.Run ahaantii jacaylku waa tartan qarsoon oo ogaanshihiisu ay wakhti qaadato, mana fududa marka u horaysa in la dareemo gabadh ku jecel sida ay u fududahay in aad dareento waxyaabaha kale, Had iyo jeer dadka uu jacaylku la soo darso rag iyo dumar kuu doono ha ahaadee si daacad ah ugama run sheegaan, ku dhiirashada inay si badheedh leh ugu soo bandhigaan jacaylka ay u hayaan qofka sida dhabta ah ay jeclaadeen, waxaanay inta badan la soo dersa dareen baqdin iyo cabsi leh, iyaga oo ka cabsi qaba haddii ay u soo bandhigaan shaqsiga ay jecel yihiin in lagu gacmo saydho oo ay la kulmayaan waji gabax.
Sidaa awgeed waxa jira waxyaabo badan oo uu ninku si fudud uga fahmi karo gabadha aadka u jecel waxeyna kala yihiin qodobadaasi. Isagoo ninku isbarbar dhig ku sameeya oo qiimeeyna ku sameeya hab dhaqanka ay gabadhu dadka ula dhaqanto iyo sida ay adiga kugula dhaqanto.
Haddii aad gabadha ka dareento in ay ku siinayso tixgelin ka badan ta ay dadka kale siiso gabadhaasi way ku jeceshahay ee sidaasi ku ogow.
Dumarka qaar ayaa aad uga werwera badbaadada qofka ay jecel yihiin, sidaa daraadeed haddii gabadhu ay aad xil isaga saarto in ay ogaato halka aad joogto iyo waxa aad ku sugan tahay iyada oo ku waydiinaysa dad xog ogaal kuu ah, gabadhaasi way ku jeceshahay. Haddii gabadha ku jecel aad ku aragto hinaase waxa lagu sifeeyaa aragtida noocaasi ah in ay ku jeceshahay, maxaa yeelay hinaasaha laftiisu waxaa uu qayb laxaad leh ka qaadtaa jacaylka dhabta ah ee ay hayso haweeneydaasi.
Ogow haddii aad ka xishootid haasaawahan hufan oo aad yeelan waydo isku kalsoonida dhexdiina taala ayaa meesha ka baxaysa. Like Like.
Aniga gabar ayaan jeclahay marka fasalka la joogo wey isoo fiirisaa waxan karan la ahay iney inacebtahay iyo iney ijeceshahay. Hadii ay gabadha ku jeceshahay ama aad doneyso iney dhankaada usoo jesato waxaa jira qodobo badan ee kaa caawin karaya iney dhankaada usoo jalecato waxaana ka mida. Sxb qufac iyo jaceylkaba ma qarsooman qofka adiga ku daneynaya siyaabo badan ayaad ku fahmi kartaa oo ay ka mid tahay inuu waqtigiisa inta badan uu adiga kuula qaato mar walibana uu jecel yahay inu kula hadlo kula sheekeysto misna jecel inuu wax walba kula wadaago, dareemo qaar waxaa jira aan afka in laga sheego loo baahneyn ee in la dareemo loo baahan yahay marka isku day inad darento.
Asc walal waxan ahay wiil runti markaan arko dhalinyarada jaceyl haysto aniga waxan isdhaha nasib uma lihid marka sababto ah gabar lama hadlo ayada ilama hadashido inkasto indhaha iguwada egaan oo aan ahay qof fool xun marka maxaa iga qaldan igala taliya sidaan gabar ku hanan lahaa. Tan kale hadii aad dooneyso inad noqoto qof xiriir doon ah ha noqon qof xerxeran oo mar waliba ahow qof furfuran oo dabeecad wanagsan leh nasiibkadina wuu hagagi dona Insha Allah qof walboo dunidan saaran nasiib ayuu leeyahay usan ogeyn lkn calafka ayaa dadka ukala soo hormara.
Walashey xaqiiqada ayaa ah in jaceylka ay ragga u nugul yihiin mana jirto wiil maanta u baahan juhdi iyo dadaal dherad ah si aad u hanato kaliya u muuji kalsooni iyo jaceyl intaas ayaaba ah hanashadiisa. Waaw waaw waxaan ku dhex arkay astaamo bari dhawayd i soo maray oo ah inay ogaato kolba halkaad ku sugan tahay. Sxb marka xigta jaceylka adiga aad abuurtay kalsoonidisa intee la egtahay. Wll anga gbar baa jcl naga dhaxeyay in mudo ah aan isla haasaawenay inkasto san ujclay aysan ii jcleen blse waxn niyada ku hayay iney ijceshahy wayo hbenki saqda dhexe ayay isoo wici jirty blse ayan kadib wey iga masertay wena iga tagtay blse nasiib wng wan qanciyay wanan isku so nqonay ugu dambeen qoftiii wxn ka dareemy caga jiid bdn iyo inaysanba isoo wici hdan wacana si wngsn aysan iila hdlin marka ano darenkeyga ku jiro inesan ijcleen ayn marar bdn xafada ugu tagy telka ka qadi jiray wana bari blse wxn arki iney telkeyga ku qoroto mcne qaali ah hasa yeshe jcl kama muuqdo ee wll mxan ku tilmaami karaa qofkaas jcl miya mise waa wax anan jirin ila taliya wlalaha myslimiinta ah jwb.
Talo 1 : Waxaad isku daydaa inaad noqto qofka ugu danbeeya ee la hadla habeenki marka ay seexaneyso subaxdina noqo qofka ugu horeya ee la hadla waxaa hubaal ah inaad maskaxdeeda aad la deris noqoneyso. Talo 4 : Qalad walba ay sameyso haka xuman oo isku day inad u samirto ugu danbeyn waxaa hubaal ah qofka hadii uu damiir leeyahay ineysan dunida ka heleyn qof sida adiga ookale u qadarinayo. Ugu horayn sln iga gidoon sxp gabadh baan iskuulka isla dhigana marwalba way i fiirisaa marka see ula xiriiraa zxp mcn.
Asc all marka xigta ani waxan ahay wiil inta aa sheegtayba la kulmay ima soo fiirin karin way iqadarisaa dadka kale way iga soocata anoo hortagan xita ima dhihi karto waa ku jclahay way iga hinaastay ani xitaa raganimada ayunbaa icawisee marka arkay say ubaqayso wax yaabo badan oo rabay inaa usoo bandhigo ayaa kala baqaa runta hadana waa kala fognahay haday sms igala hadlayso waa gabar caadi ah iyo codba lkn hada muqal ku waco way xishoonaysaa anigaaba baqa oo cabsoda ana yayna cidla ka daremin ayaa isleyahay iyana way daadalysaa wayna isku daydaa inay ifarxad galiso lkn cabsidan iga haysa maxaan ku xaliya.
Walaal marka hore kusoo dhawoow page-kena aad ka heli karto caawimaad badan oo aad u baahan tahay, marka xigta waxaa salaan qaali ah ayaan hawada kuso marineyna inagoona ka cudur daaraneeno jawabta aan kaala soo daahnay. Walaal aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad inoogu diiri gelineysid inan qoraalo badan idin soo gaadhsino waana ka xumahay waqtiga ku dhaafay lkn waxaa ku rajeynaa inad mida hada aad heysato aad si wacan ugu faa ideysan doontid.
Asc dhaman bahda webkan salan ka dib aniga waxan jeclahay gabar waliba mudd dher an is naqana xitta dugsigega hoose illa maanta n ahay qof jaamci ah waxan is naaana ku dhawad 6 sano iyo bar marka lkn sanadii ugu damaysay wan fahmi la ahay qofta maxa djacay haddan waco haddan wicin haddan ooyo haddan farxo intaba shaqo kuma laha lkn waxy isku dayda dhibkada iay i shegato an wax kala qabto Ogow qoftu aniga wan ku dhartaa lkn eyada ma aqaan haddi an isk dayay inan gooyo waan awoodi la ahay ila tali xariirkeda siduu kula muqdaa sxb maku saxanahy goanka ah inanba faraha ka qaado.
Mrka wxn ugu jwby xafada an ika raxeysana an ku idhi.Adigoo careysan inaad seexato Tani waa tilmaan kale oo lagu ogaado in ninka uu ku jecelyahay iyo inkale isla markaana dumarka looga baahanyahay inay ka eegaan. Hadii aad ka weyso 14 kaan calaamadood jaceyl dhab ah kuuma haayo ee yuusanSiraha Ku Qarsoon Maskaxda Ninka Iyo Dabeecadaha Ka Dhashay Ee Dumarku Aanay Jeclayn Guud ahaanba abuurka aadamuhu waxa uu ka mid yahay calaamadaha tirada badan ee adduunkan dushiisa lagu arkayo ee ina tusaya awoodda, farshaxannimada iyo xikmadda Alle ee aanay maskaxda aadamuhu si dhayal ah u sawiran karayn, ama awooddeeduba aanay gaadhsiisnayn Ninka Ragga ah waa qeyb ka mid ah Abuurta Alle ee quruxda badan Wuxuu bilaabaa dhex-dhexaadnimo isagoo aad u yar Wuxuu wax ay naftiisa u baahnayd siiyaa Walaashii Wuxuu isagoo yar ku riyoodaa siduu kaalinta Aabihii u geli lahaa oo u nasin lahaa Wuxuu u huraa waqtigiisa siduu Waalidkii u caawin lahaa Wuxuu ku bixiyaa …Ninka jecel haweeneydiisa aad ayuu u qadariyaa; wuxuu qadarinayaa fekerkaaga, iyo dareenkaaga —- wuxuu sidoo kale qiimeynayaa jirkaaga, gacana kuuma qaadayo.
Hadaba haddii aad ka dareento gabadha aad wada sheekeysataan amaba walaltinimo idinka dhexeyso hadii aad ku aragto astaamahan waxa lagaaga baahan Sidaa darteed, Ninka sida dhabta ah kuu jecel meel ayuu iska dhigaa dumarka kale mana ku geeyo boos aad ugu dagaalanto waqtigiisa iyo inuu muhiimad kusiiyo. Aasaasaha bogga laga dukaameysto ee Amazon. Qaabka labaad ku soo xiga qaabkani waa inay haweeneydu ninka ku kor fariisato Jacaylka Ninka ayaa ka duwan jacaylka Gabadha iyo waliba qaabka ay Raggu u Fikiraan waana wax ay tahay in ay ogaato Gabadhu si ay u ogaato Nooca jacaylka Ragga iyo qaabka ay ula dhaqmayso laakiin arintaas ayaan ahayn in ay gaabdhu Aqbasho Aamusnaanta Ninka iyo daryeelkiisa maadama ay ku leedahay xuquuq maadama ay tahay qofka jacaylka la wada.
Farhia Abdallaviews. Blog Store. Ninka Ku Jecel Kuna Ixtiraama sida ay Tahay: Gabadh walba waxa ay jeceshahay Ninka ku jeclaada sida ay tahay kuna Ixtiraama sida ay tahay hadii ayna lahayn maal ama qurux laakiin tahay gabadh leh shaqsiyada fiican waxa ay jeceshahay in ay hesho In ku jeclaada sida ay tahay kuna Ixtiraama waliba. Fur furnaan Nin haddii uu si dhab ah kuu jecelyahay aad ayuu kuugu fur furnaanayaa si uusan ugu fur furneyn dadka kale. Waxaa jiro calaamado badan uu leeyahay ninka ku jecel ama wiilka ku jecel oo aad ku ogaan karto.
Ninka dhabta kuu jecel kan Astaan ku garo Gabareey - Duration: Sidaa awgeed waxaan jeclaystay in aan dumarka u sheego una Sharaxo Sifooyinka ay ku garan karaan amaba ay ku dooran karaan Ninka Wanaagsan oo Dumarka Qaddariya waayo Raggu way isku wada Dhex jiraan, waxaana loo baahan yahay in aad kala garataan Ragga kan Wanaagsan oo Dumarka Qadariya iyo kan Xun oo Dumarka Lugta ka gooya.
A buff bunny protecting a small bunny is one of the newest punctuation-based memes to hit Twitter. In uu yahay qof bulshaawi ah oo dabeecadiisu ay soo jiidanayso dadka. Ciniinnimada ninka haysaa haddaanay ahayn mid cusbitaal iyo qalliin u baahan, balse tahay mid nafsiyadeed oo waqti ku xiran, u heli meyno ninkaasi dhakhtar kaga wanaagsan darmaan uu jecel yahay iyana jecel oo ku daaweeysa istiimin iyo dhiirri gelin.
Sidee ku ogaan karta gabadha sida dhabta ah kuu jecel - Duration: Dumarku waa qiimeeyaan ninka deeqsiga ah. Gabadha ku jecel ee aan kuu soo bandhigin jacaylkeeda waxa ku abuurma dareen baqdin leh, waxaanay had iyo jeer ka werwertaa in ay waydo ninka ay jeceshahay oo uu raaco gabadh kale oo aan iyada ahayn.
Marka uu nin kaa dhigo mudnaantiisa, waxay muujineysaa inuu ku qiimeeya isla markaana aad muhiim u tahay. Badbaado Channel 47, views.
Language: English Location: United States Restricted Mode: Off Sidaa darteed, Ninka sida dhabta ah kuu jecel meel ayuu iska dhigaa dumarka kale mana ku geeyo boos aad ugu dagaalanto waqtigiisa iyo inuu muhiimad kusiiyo.Run ahaantii jacaylku waa tartan qarsoon oo ogaanshihiisu ay wakhti qaadato, mana fududa marka u horaysa in la dareemo gabadh ku jecel sida ay u fududahay in aad dareento waxyaabaha kale, Had iyo jeer dadka uu jacaylku la soo darso rag iyo dumar kuu doono ha ahaadee si daacad ah ugama run sheegaan, ku dhiirashada inay si badheedh leh ugu soo bandhigaan jacaylka ay u hayaan qofka sida dhabta ah ay jeclaadeen, waxaanay inta badan la soo dersa dareen baqdin iyo cabsi leh, iyaga oo ka cabsi qaba haddii ay u soo bandhigaan shaqsiga ay jecel yihiin in lagu gacmo saydho oo ay la kulmayaan waji gabax.
Sidaa awgeed haddii aanu sii ogayn qofka wax jeceli jawaabta uu kala kulmi doono qofka uu jeclyahay, marka uu jacaylkiisa u sheegan waayo ayaa waxaa ay ku kaliftaa qofkaasi amaba sabab u ah in qofkaasi uu qarsado jacaylkiisa taas oo khataro caafimaad oo nafsaani ah ku keenta qofka wax jecel. Waxa jira dad uu ka xoog bato dareenka qiirada leh ee jacayku oo si fududna looga fahmi karo rag iyo dumar kuu doono ha ahaadee. Si kastaba ha ahaatee waxa jira dhaqamo iyo caadooyin badan oo u diidaya gabadha ceebna ku ah in ay si fudud ugu soo bandhigto wiilka ay jeceshahay jacaylkeeda iyo waxyaabaha ka dhabta ah ee ay ku dooratay amaba dareenkeeda nafahaaneed.
Sidaa daraadeed ragga way ku adagtahay in ay ogaadaana gabadha aadka u jecel, maxaa yeelay dumarku uma qirtaan jacaylku sida uu yahay, xitaa haddii uu ka dhab yahay. Sidaa awgeed waxa jira waxyaabo badan oo uu ninku si fudud uga fahmi karo gabadha aadka u jecel waxeyna kala yihiin qodobadaasi. Isagoo ninku isbarbar dhig ku sameeya oo qiimeeyna ku sameeya hab dhaqanka ay gabadhu dadka ula dhaqanto iyo sida ay adiga kugula dhaqanto.
Haddii aad gabadha ka dareento in ay ku siinayso tixgelin ka badan ta ay dadka kale siiso gabadhaasi way ku jeceshahay ee sidaasi ku ogow. Dumarka qaar ayaa aad uga werwera badbaadada qofka ay jecel yihiin, sidaa daraadeed haddii gabadhu ay aad xil isaga saarto in ay ogaato halka aad joogto iyo waxa aad ku sugan tahay iyada oo ku waydiinaysa dad xog ogaal kuu ah, gabadhaasi way ku jeceshahay.
Haddii gabadha ku jecel aad ku aragto hinaase waxa lagu sifeeyaa aragtida noocaasi ah in ay ku jeceshahay, maxaa yeelay hinaasaha laftiisu waxaa uu qayb laxaad leh ka qaadtaa jacaylka dhabta ah ee ay hayso haweeneydaasi. Gabadha ku jecel ee aan kuu soo bandhigin jacaylkeeda waxa ku abuurma dareen baqdin leh, waxaanay had iyo jeer ka werwertaa in ay waydo ninka ay jeceshahay oo uu raaco gabadh kale oo aan iyada ahayn.
Astaamahan aad aragtay Run ahaantii waxa aad si fudud u soo jiidan kartaa una ogaan kartaa, kasban kartaana qalbiga gabadha ku jecel. Adgoo Isku daya marka aad si dhab ah oo aan dheel-dheeli ku jirin aad u hubiso qodobadan in aad si talaabo talaabo ah ula kulantid ulana haasawdid, una soo jiidatid gabadha ku jecel.
Ogow haddii aad ka xishootid haasaawahan hufan oo aad yeelan waydo isku kalsoonida dhexdiina taala ayaa meesha ka baxaysa. Ayuda sobre accesibilidad. Todas las notas. Amigos etiquetados.Run ahaantii jacaylku waa tartan qarsoon oo ogaanshihiisu ay wakhti qaadato, mana fududa marka u horaysa in la dareemo gabadh ku jecel sida ay u fududahay in aad dareento waxyaabaha kale, Had iyo jeer dadka uu jacaylku la soo darso rag iyo dumar kuu doono ha ahaadee si daacad ah ugama run sheegaan, ku dhiirashada inay si badheedh leh ugu soo bandhigaan jacaylka ay u hayaan qofka sida dhabta ah ay jeclaadeen, waxaanay inta badan la soo dersa dareen baqdin iyo cabsi leh, iyaga oo ka cabsi qaba haddii ay u soo bandhigaan shaqsiga ay jecel yihiin in lagu gacmo saydho oo ay la kulmayaan waji gabax.
Levi x reader he hurts you
Sidaa daraadeed ragga way ku adagtahay in ay ogaadaana gabadha aadka u jecel, maxaa yeelay dumarku uma qirtaan jacaylku sida uu yahay, xitaa haddii uu ka dhab yahay. Sidaa awgeed waxa jira waxyaabo badan oo uu ninku si fudud uga fahmi karo gabadha aadka u jecel waxeyna kala yihiin qodobadaasi.
Isagoo ninku isbarbar dhig ku sameeya oo qiimeeyna ku sameeya hab dhaqanka ay gabadhu dadka ula dhaqanto iyo sida ay adiga kugula dhaqanto.
Ogow haddii aad ka xishootid haasaawahan hufan oo aad yeelan waydo isku kalsoonida dhexdiina taala ayaa meesha ka baxaysa.Post a Comment. Aqriste marka waxaan rabaa in aan wax uun kaaga fasiro sida aad ku kala ogaan kartid qofka ku jecel iyo qofka iska dhigaa inuu ku jecelyahay adiga. Waa qof aan kugu kalsooneen, oo waxwalba oo xumaan ah kaa suga.
Waa qof marka aad aragtid aad isku diyaarineesid sida aad isku difaaci laheeyd, iyo erayadii aad ku raali gelin laheeyd. Waa qof aan hadalkaaga waxba ka soo qaadin, in aad ooysid iyo in aad qosleysidna iskugu midyihiin.
Waa qof waalidkaa neceb, kaaga sheekeeya xumaantooda, wiilsha iyo gabdhaha kula dhashay aanba la tusi karin. Jecel in aad kala hartaan asaxaabtaada, marwalba oo aad la kulmeysidna qiil u sameeyo si aad ula joogtid guriga asiga, ayagane aad balantii aad la gashay kaga baxdid. Waa qof ku suaalaa waxa kugu kasbay in aad qalad sameysid meeshii oo ka fekeri lahaa sida loo sixi lahaa qaladkaaga. Waa qof doonis badan, rabana inuu asiga kali ah leho waxa oo rabo. Waa qof shaki badan oo tusaala ahaan taleefankaaga baara, markaad banaanka jirtid toban jeer ku soo waca asoo ku weeydiinaa meesha aad joogtid iyo qofka aad la joogtid.
Waa qof aad jeclaatid in aad bedeshid hadii aad awoodi laheeyd, oo aan hal daqiiqo laheeyn tayooyinkii aad shalay ku dooratay. Waa qof waxwalba oo aad sameeysid, waxwalba oo aad jeceshahay oo aad dartiis u deeysid, amar walba oo aad ka qaadatid, waxwalba oo aad sida oo asiga kuu sheegay aad ku sameeysid aanan waligiis ku qanci doonin waxa aad tahay, waxuu uun sii rabaa inta aad siisay in ka badan, waxuu rabaa in aad waligaa naftaada qax joogta ah iyo qaharka aan dhamadn laheeyd inta nafu kugu jirto aad kula jirtid.
Waa isku taxalujiya inuu noloshadii hore gud gelsho, tusaala ahaan hadii aad shaqeeyn jirtay ama aad wax baran jirtid kaa reeba shaqada iyo waxbarashada si aad u noqotid qof aan asiga ka maarmin. Waa qof kuu sheegaa waxwalba oo aad sameyneysid, ka soo bilaw dharka aad ku labisaneysid ku geey filinka iyo barnaamijka aad ka fiirsan kartid tifiiga ama aad ka dhageysan kartid raadiyaha.
Waa qof hadii aad wax isku qilaaftaan gacantiisa iyo afkiisa gacantiisa ay soo horeyso, oo ku dila. Waa qof calaacal, dhaar badan, ooyin iyo isdifaac badan markii oo arko in xumaantiisa ku gaartay oo aad diyaar u tahay in aad talaabo ka qaadid dhaqankiisa xun, si oo kuugu haayo meeshaada, waxwalba oo ogyahay in aad kula joogi kartid ayuu kaa balan qaadaa, asbuuc kadibna dhaqan xumadiisii iyo bahdilkiisii ayuu ka sii wataa halkii hore.
Waa qof markuu xanaaqa kuu ciqaabo siyaalo kala duwan, sida inuusan kula hadlin, inuu is moogeysiiyo in aad la joogtid, inuu erayo xun oo xanuunkooda uusan aqoonin sida uu qalbigaaga u gubaa oo kugu dhego jibsho markasta oo ku arko. Waa ninka adoo la joogo la sheekeeysta dumarka kale, si oo adiga kuu ciqaabo. Ama adigoo maqlaa taleefan gabar kale ku shukaansada.
Waa kan isku sheegaa inuu ku jecelyahay laakiin ilmahaaga hortooda kugu dila, kugu caaya, ayagane hortaada intoo kale kula sameeyo. Ninka ama gabadha sheeganeyso in ay ku jeceshahay oo leh toban ama shan ka mid ah xataa calaamadaha aan kor ku soo xusay ka bixi noloshaada, hadii aad badbaado rabtid. Waana hubaal lama noolaan kartid qofkaas ileen waa qof wata cudur kugu dhici karo oo ku faafi og markiiba xidida jirkaaga.
Posted by UnknownPublished at PM and have 0 comments. No comments:. Newer Post. Older Post. Xulka Isbuucaan galmada. Dumarka ugu Cambarka macaan waa kuwa leh astaamahan wax ka baro. Guskaaga haduu afkiisa wenyahay sidaan ayaa siilka loo galiyaa warbixin sirta glmada. Gabdhaha ninka ku niikiyo Xubinta xiliga galmada War-bixin. Maahmaahyo soomaaliyeed English loo tarjumay.Aqriste marka waxaan rabaa in aan wax uun kaaga fasiro sida aad ku kala ogaan kartid qofka ku jecel iyo qofka iska dhigaa inuu ku jecelyahay adiga.
Waa qof aan ku qaddarineynin, isla markaasna ay la xunyihiin waxwalba oo aad adiga soo jeedisid. Waa qof aan kugu kalsooneen, oo waxwalba oo xumaan ah kaa suga.
Waa qof marka aad aragtid aad isku diyaarineesid sida aad isku difaaci laheeyd, iyo erayadii aad ku raali gelin laheeyd. Waa qof aan hadalkaaga waxba ka soo qaadin, in aad ooysid iyo in aad qosleysidna iskugu midyihiin. Waa qof waalidkaa neceb, kaaga sheekeeya xumaantooda, wiilsha iyo gabdhaha kula dhashay aanba la tusi karin.
Jecel in aad kala hartaan asaxaabtaada, marwalba oo aad la kulmeysidna qiil u sameeyo si aad ula joogtid guriga asiga, ayagane aad balantii aad la gashay kaga baxdid. Waa qof ku suaalaa waxa kugu kasbay in aad qalad sameysid meeshii oo ka fekeri lahaa sida loo sixi lahaa qaladkaaga. Waa qof doonis badan, rabana inuu asiga kali ah leho waxa oo rabo. Waa qof shaki badan oo tusaala ahaan taleefankaaga baara, markaad banaanka jirtid toban jeer ku soo waca asoo ku weeydiinaa meesha aad joogtid iyo qofka aad la joogtid.
Waa qof ka maseera waxwalba, xataa ilmahiina aad wada dhasheen, sidaas darteed inuu kuu kontaroolo si walba xataa fekerka aad bulshada aad loo nooshahay ka qabtid isku dayaa. Waa isku taxalujiya inuu noloshadii hore gud gelsho, tusaala ahaan hadii aad shaqeeyn jirtay ama aad wax baran jirtid kaa reeba shaqada iyo waxbarashada si aad u noqotid qof aan asiga ka maarmin.
Waa qof markuu xanaaqa kuu ciqaabo siyaalo kala duwan, sida inuusan kula hadlin, inuu is moogeysiiyo in aad la joogtid, inuu erayo xun oo xanuunkooda uusan aqoonin sida uu qalbigaaga u gubaa oo kugu dhego jibsho markasta oo ku arko. Waa ninka adoo la joogo la sheekeeysta dumarka kale, si oo adiga kuu ciqaabo.
Ama adigoo maqlaa taleefan gabar kale ku shukaansada. Waa kan isku sheegaa inuu ku jecelyahay laakiin ilmahaaga hortooda kugu dila, kugu caaya, ayagane hortaada intoo kale kula sameeyo. Ninka ama gabadha sheeganeyso in ay ku jeceshahay oo leh toban ama shan ka mid ah xataa calaamadaha aan kor ku soo xusay ka bixi noloshaada, hadii aad badbaado rabtid.
Waana hubaal lama noolaan kartid qofkaas ileen waa qof wata cudur kugu dhici karo oo ku faafi og markiiba xidida jirkaaga. Fartuun Birimo: Anoo noole kuu jecel. Haddaad raacday naag kale. Waa naruuro beeshee, Aan is nabad gelyeynee, Maxaad iigu soo noqonee Amaad iigu naaloonee, Nuxurkaaga iga guur.! View all posts by fsquareproduction. Skip to content. Home About Contact. Share this: Twitter Facebook. Like this: Like Loading Published by fsquareproduction. By continuing to use this website, you agree to their use.
W: san wolfgang
Thousand sons rubric marines bits torso f
Replies to “Sidee ku ogaan kartaa qofka ku jecel”